Sekta - Wikipedia
Ny sekta dia vondrona ara-pivavahana izay heverina ho manana fisainana mifanohitra amin' izay ataon' ny maro ho marina na nifandovana hatramin' ny nampisy ilay karazam-pivavahana. Azo lazana fa samy afaka manondro izay ataony hoe "sekta" ny fivavahana rehetra, ka ny sekta taloha rehefa lasa matanjaka dia miantso izay misintaka aminy na tsy mitovy fampianarana aminy aty aoriana hoe "sekta". Misy koa ireo atokom-pivavahana lazaina hoe sekta na dia tsy niforona avy amin' ̟ny karazam-pivavahana mahazatra efa nisy talohany. Raha eo amin' ny lalàm-panjakana amin' ny ankapobeny, ny fivavahana na ny finoana iray izay mahatonga ny fahalalahan' ny mpino ao aminy ho very manontolo na amin' ny ampahany no atao hoe sekta.
1 Ny teny hoe sekta
1.2 Fampiasan' ny mpahay fiarahamonina ilay teny
1.2.1 Amin' i Max Weber
1.2.2 Amin' i Ernst Troeltsch
1.2.3 Amin' i Bryan Wilson
Ny teny hoe sektaHanova
Avy amin' ny fanagasiana ny teny frantsay hoe secte ny teny hoe sekta. Avy amin' ny teny latina hoe sectus ireo teny roa ireo, ka midika tamin' ny voalohany hoe "lalana arahina", "antoko", "antony", "foto-pampianarana", iray tarika amin' ny anarana latina hoe secta, izay samy avy amin' ny matoanteny latina hoe sequi, izay midika hoe "manaraka". Ny fampisampanan-teny ny matoanteny latina hafa hoe secare (izay midika hoe "manapaka"), ka nanome ny hoe sectus sy sectum ary ny hoe sectum, dia niteraka fifangaroana nandiso zavatra, nefa nohararaotin' ireo mpanoratra kristiana manohitra izay noheveriny ho heresia (fampianaran-diso, finoan-diso) izany.
Marihina fa ny fiteny anglisy dia tsy mampiasa ny teny hoe sect fa ny hoe cult mba hanondroany izay atao amin' ny teny frantsay hoe secte. Mampiasa ny teny hoe sect ny fiteny anglisy nefa tsy amin' ny heviny ratsy. Tsy mitovy izany ny hevitry ny teny frantsay hoe secte sy ny teny anglisy hoe sect. Ny atao amin' ny teny frantsay hoe culte kosa dia lazaina amin' ny teny anglisy hoe cult ihany koa.
Fampiasan' ny mpahay fiarahamonina ilay tenyHanova
Amin' i Max WeberHanova
Ny fampiasan' ny manam-pahaizana ny teny hoe sekta dia mampahatsiahy ny asa soratr' ilay sôsiôlôga alemàna atao hoe Max Weber sy ilay teôlôjiana atao hoe Ernst Troeltsch (1865-1922). Izy roa ireo dia samy mamaritra ny ataony hoe "sekta" amin' ny alalan' ny fampifanoherany azy amin' ny ataony hoe "Fiangonana" na "Eglizy", ka ity farany no heverina fa manjaka (na manjakazaka), arahin' ny be sy ny maro. Amin' izy ireo dia manana toetra tsy manilika ny "Fiangonana" satria mandray na ny olo-masina na ny mpanota, na ny olo-marina na ny tsy marina, fa ny "sekta" kosa dia manilika ka tsy mandray afa-tsy ireo mpivavaka miditra lalina amin' ny finoana. Amin' i Weber dia an-tsitrapo ny fidirana ao amin' ny "sekta" iray ka tokony ho mendrika izany izay te hiditra ao. Ny "Fiangonana" kosa dia tsy mandidy izay hiditra ao aminy handalo fanadihadiana na mijery ny toetran' ny olona izay hiditra ao aminy.
Amin' i Ernst TroeltschHanova
I Troeltsch kosa dia milazalaza ny ataony hoe "sekta" ho vondrona madinika izay matetika betsaka mahantra nahafoy ny zava-tsoan' ity tany ity, ka mitady fifandraisam-pirahalahiana eo no ho eo. Tsy afangaron' i Troeltsch amin' ny "tambajotra mistika" izay misokatra kokoa sady malalaka kokoa ary tsy voafehin' ny fitsipika henjana loatra ny sekta. Maro amin' ny sôsiôlôga hafa toa an' i Victor W. Turner no manampy koa fa manana fisainana apôkaliptika ny sekta.
Amin' i Bryan WilsonHanova
Ilay sôsiôloga britanika Bryan Wilson dia mamaritra ny "sekta" araka ny endri-pifandraisany amin' izao tontolo izao. Aminy dia misy ny fivavahana manjaka (be mpanaraka), izay amin' ny ankapobeny mankasitraka ny fihazonana ny lamina efa mipetraka, fa ny "sekta" na ny "fivavahana vaovao" kosa dia manohitra izany, ka izay manohitra ny fampianarany dia roahiny. Mihevi-tena ho vondron' olom-boafidy ny mpikambana ao amin' ny "sekta" sady manantitra ny fitovian' ny mpikambana ao aminy nefa ahitana antanan-tohatra hentitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekta&oldid=1040512"
Dernière modification le 30 Novambra 2021, à 13:15
Voaova farany tamin'ny 30 Novambra 2021 amin'ny 13:15 ity pejy ity.